होसियार ! पैसाबाट छालारोग सर्छ – BRTNepal
काठमाडौं: १४:२५ | Colorodo: 02:40
होसियार ! पैसाबाट छालारोग सर्छ
बिआरटीनेपाल २०७५ माघ ४ गते ८:०७ मा प्रकाशित
स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन खोज्नु मानवीय स्वभाव हो । मानिसले जानाजान स्वास्थ्य बिगार्न चाहँदैन । उसले सकेसम्म स्वास्थ्य ठीकठाक राख्न खोज्छ । स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन खोजे पनि दैनिकजसो गर्ने सानातिना असावधानीले उसलाई गम्भीर समस्याले सताउँछ । वस्तु विनिमयका लागि दैनिकजसो प्रयोग गर्ने पैसा (नोट) बाट समेत मानिसले स्वास्थ्य बिगार्दै गएका छन् । नोट प्रयोगको असावधानीले उसलाई छाला रोगले दुःख दिने गरेको छ । यसो भन्दा तपाईं अचम्मित हुनुभयो होला । अचम्मित हुनुभन्दा सचेत हुने प्रयत्न गर्दा लाभदायी हुनेछ ।
‘हामीले प्रयोग गर्ने नोटमा जङ्स, फङ्गल्स र भाइरस टाँसिएका हुन्छन,’ चर्मरोग विशेषज्ञ हरुका अनुसार त्यस्ता नोट मानिसको छालामा पर्नसाथ सजिलै जङ्स, फङ्गल्स, भाइरस सर्ने गर्छ ।’ वस्तुबाट वस्तु विनिमय गर्ने युग हुँदै सुन, चाँदी, धातु, पित्तल र तामालाई विनिमयको भरपर्दो माध्यम बनाइएको विगत नेपालीमाझ छिपेको छैन । एकताका कौडी विनिमयको गतिलो माध्यम बनेको थियो । हिजोआज त्यसको ठाउँ नोटले लिएको छ । जसले वस्तु विनिमयका लागि सुविधा भएको छ ।
सुविधाले द्विविधा पनि त निम्त्याउँछ भन्ने नेपाली उखान छ । उखान त्यत्तिकै बनेका हुँदैनन् । त्यसमा विवाद गरिरहन पर्दैन । ‘मासु किन्न मासुपसल पुग्नुभयो भने व्यापारीले मासु काटेकै हातले ग्राहकबाट पैसा लिन्छन,’ विशेषज्ञ डा. भन्छन्, ‘पैसा बढी दिएका छन् भने ग्राहकले फिर्ता लिनैपर्यो । त्यस्तो अवस्थामा व्यापारीले मासु काटेकै हातले पैसा फिर्ता गर्छन् । कतिपय पैसा रगतसरी भेटिइन्छन् । त्यस्तो पैसाबाट नजानिँदोपाराले नोट प्रयोगकर्तालाई छालालगायत अन्य रोग सर्न सक्छ ।’
राजा त्रिभुवनले आधुनिक कागजी नोट प्रचलनमा ल्याएको सर्व्विदितै छ । कागजका नोट सफा भएन भनेर पोलिमर नोटसमेत प्रचलनमा ल्याइएको थियो । विभिन्न खोट देखाउँदै पोलिमर नोट पनि त्यति धेरै समय प्रचलनमा आएन । कागजी होस् या पोलिमर नोट, त्यसको सही सदुपयोग गर्न जानिएन भने अभिशाप हुन्छ । हिजोआज पनि औंलामा थुक्दै पैसा गन्ने प्रचलन छ । ‘त्यस्तो गर्नेको शरीरमा झन् छिटो छालारोग सर्छ,’ बिज्ञहरु भन्छन्, ‘नोटमा भएका जङ्स, फङ्गल्स, भाइरस जिब्रो हुँदै शरीरमा पुग्छ । त्यतिबेला मानिसलाई टाइफाइड हुन्छ । हैजा लाग्छ । भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ ।’
औंला चाट्दै पैसा गन्दा छालाबाट भन्दा छिटो जङ्स, फङ्गल्स, भाइरस सर्छ । त्यसबाट बच्न औंलामा थुक्दै पैसा गन्ने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ । इच्छा भए उपाय कति–कति । पैसा कारोबार गर्नसाथ साबुनपानीले हात धुन बानी बसाल्न सकिन्छ । साबुनपानीले हात धुन सम्भव नभए खरानीपानी प्रयोग गर्दा भइहाल्छ । इच्छाशक्तिमात्रै हुनुपर्छ ।
सम्बन्धित अभिभावकले सकेसम्म बालबालिकालाई नोट दिन हुँदैन । नोट पाएमा बालबालिकाले अञ्जानवश मुखमा पुर्याउँछन् । नोट भन्नासाथ एकबाट अर्काको हातमा पुग्ने वस्तु हो । एकबाट अर्काको हात पुगेको नोट सफा हुने कुरै भएन । त्यस्तो नोट टोक्दा बालबालिकासमेत अस्वस्थ हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा सम्भव नहुन सक्छ । तर, ‘क्यासलेस सिष्टम’ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके नोटबाट सर्ने विभिन्न किसिमका रोगबाट टाढा रहन सकिने चर्मरोग विशेषज्ञहरूको धारणा छ ।